COVID-19: Sida loo gashto oo looga saaro qalabka illaalada shaqsiga
Kani waa hagid loogu tallogalay shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee ku lugleh howlaha daryeelka bukaanka ee goobta daryeelka caafimaadka. Waxay u jeedadeeda tahay muujinta nooca qalabka illaalada shaqsiga ama PPE looga baahanyahay inay si sax ah u illaaliso shaqsiga. Sida ku saleysan cadeYnta la heli karo hadeer, WHO ayaa ku talisay PPE oo loogu tallogalay daryeelka bukaanada COVID waa taxadarada TAABASHADA iyo DHIBCAHA, iyo ka dhaafida nidaamyada soo saarayo hawada, taas oo u baahan TAABASHADA iyo HAWADA KA DHASHO (sidaas darteed, maaskaraha neefsashada sida N95, FFP2, FFP3). Niyad ku haynta, PPE wuxuu qeyb ka yahay xirmo tallaabooyin ah ee ka hortaga iyo xakameynta caabuqa oo waa in loo fulliyaa sida ka qeyb ah xeelada nooca badan ee maareynta bukaanada COVID-19. Kaliya shaqaalaha caafimaadka ee u tababaran oo karti u leh isticmaalka PPE waa in loo ogolaadaa soo gelitaanka qolka bukaanka.
English - العربية - македонски - 中文 - Shqip - français - ภาษาไทย - Português - Español - Nederlands - Tetun - Русский - Türk- සිංහල - தமிழ் - Казақ тілі
Dulmarka: Kani waa hagid loogu tallogalay shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee ku lugleh howlaha daryeelka bukaanka ee goobta daryeelka caafimaadka. Waxay u jeedadeeda tahay muujinta nooca qalabka illaalada shaqsiga ama PPE looga baahanyahay inay si sax ah u illaaliso shaqsiga. Sida ku saleysan cadeYnta la heli karo hadeer, WHO ayaa ku talisay PPE oo loogu tallogalay daryeelka bukaanada COVID waa taxadarada TAABASHADA iyo DHIBCAHA, iyo ka dhaafida nidaamyada soo saarayo hawada, taas oo u baahan TAABASHADA iyo HAWADA KA DHASHO (sidaas darteed, maaskaraha neefsashada sida N95, FFP2, FFP3). Niyad ku haynta, PPE wuxuu qeyb ka yahay xirmo tallaabooyin ah ee ka hortaga iyo xakameynta caabuqa oo waa in loo fulliyaa sida ka qeyb ah xeelada nooca badan ee maareynta bukaanada COVID-19. Kaliya shaqaalaha caafimaadka ee u tababaran oo karti u leh isticmaalka PPE waa in loo ogolaadaa soo gelitaanka qolka bukaanka.
Ujeedooyinka waxbarashada: Dhammaadka koorsadaan, ka qeybqaatayaasha waa inay u suurtogashaa inay:
muuji qaabka saxda ah ee lagu gashto oo looga saaro PPE; iyo
muuji qaabka ugu saxan ee lagu sameeyo nadaafada gacmaha oo marsashada alkulada ku saleysan (ABHR), sida waafaqsan qaabka WHO-ku talisay.
Muddada koorsada: Qiyaastii 15 daqiiqo.
Shahaadada: Xaqiijinta Ka qeybqaadashada waa loo helayaa ka qeybqaatayaasha dhameystiro boqolkiiba 100% ee qoraalka koorsada.
Haddii aad xiiseyneysid wax badan ka barashada qeybaha kale ee ka hortaga iyo xakameynta caabuqa (IPC) ee marxaalada COVID-19, fadlan tixraac koorsada OpenWHO:
Koorsooyinka IPC ee Ingiriisiga: https://openwho.org/courses?lang=en&q=IPC
Koorsooyinka IPC ee dhammaan luqadaha la heli karo: https://openwho.org/courses?q=IPC
Loo tarjumay Soomaali,laga tarjumay COVID-19: How to put on and remove personal protective equipment (PPE), 2020. WHO mas'uul kama ah qoraalka ama sax ahaanta turjuman. Haddii ay dhacdo is-waafiqid ka dhaxaysa Ingiriisiga iyo Soomaaliga, nooca Ingiriisiga asalka ah wuxuu noqonayaa midka ansaxa ah oo run ah.
Tarjumaaddaan ma aysan xaqiijin WHO. Kheyraadkaan waxaa loogu talagalay ujeedooyinka taageerada barashada kaliya.
Qeybta 1: Sida-loogu-hago xirashada iyo ka saarida PPE sida waafaqsan taxadarada dhibcaha/taabashada oo marxaalada COVID-19:
Qeybtaan waxay bixisaa fiidyaha oo sida loogu hago xirashada iyo ka saarida PPE sida waafaqsan taxadarada dhibcaha/taabashada ee loogu tallogalay COVID-19, sidoo kale sida labo illaha boostiga ah. Dhammaadka qeybtaan, ka qeybqaatayaasha waa inay u suurtogashaa inay muujiyaan qaabka saxda ah ee loogu xirto qalabka illaalada shaqsiga sida waafaqsan qaabka WHO-ku talisay ee loogu tallogalay taxadarada dhibcaha/taabashada COVID-19.
Qeybta 2: Sida-loogu-hago xirashada iyo ka saarida PPE sida waafaqsan taxadarada hawada ka dhasho/taabashada loogu tallogalay nidaamyada soo saarayo hawada ee COVID-19:
Qeybtaan waxay bixisaa fiidyaha oo sida loogu hago xirashada iyo ka saarida PPE sida waafaqsan taxadarada hawada ka dhasho/taabashada ee loogu tallogalay COVID-19. Dhammaadka qeybtaan, ka qeybqaatayaasha waa inay u suurtogashaa inay muujiyaan qaabka saxda ah ee loogu xirto qalabka illaalada shaqsiga sida waafaqsan qaabka WHO-ku talisay ee loogu tallogalay taxadarada hawada ka dhasho COVID-19.